फाइँफुट्टी ब्लूज ~ brazesh
September 11, 2018 नेपाली, फाइँफुट्टीराज No comments
यत्रो लामो समयसम्म फाफुराको संगत गरेपछि तपाईंलाई लागेको हुनुपर्छ, अब त यो बजियाको एकएक कुरासंग परिचति भइयो । तर अझै पनि फाफुराका केही यस्ता गुणहरु (त्यसमा अगाडि ‘अव’ प्रत्यय लगाएर पढ्ने स्वतन्त्रता तपाइंर््लाई सम्विधानले दिएको छ है) छन्, जसका बारे तपाईं अझै पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्छ । त्यसमध्ये एक, फाफुरा गीतसङ्गीतको पारखी पनि हो । पारखीमात्र किन, कुनै बेला ऊ निकै मिठो गीत कराउन पनि सक्थ्यो । मोबाइलका टावरहरुलाई त बेक्कारमा दोष लगाइयो । खासमा भन्ने हो भने भंगेराहरु पलायन भएको फाफुराको गायनले गर्दा हो । भंगेरा बाहेक पनि कोइली, मैना लगायतका केही फाफुरीजस्ता सुर तालको महत्व नबुझ्ने चराहरु पनि फाफुराको स्वरकै कारण पलायन भएका हुन् । तर काग, सारुङ्ग र लाटोकोसेरोजस्ता सङ्गीतका पारखी चराहरु भने फाफुराको वरिपरि झुम्मिन्थे र मस्त हुन्थे ।
राम्रा गायकहरुले गीत गाउँदा आँखा टम्म चिम्लेको त तपाईंहरुले देख्नुभएकै होला नि । फाफुरा पनि टम्मै आँखा चिम्लेर गाउँथ्यो । किनभने कलाकार भनेको त जन्मजात समवेदनशील हुन्छ । ऊ अरु कसैको पीडा देख्न सक्दैन । फाफुरा पनि आफ्ना श्रोताहरुको पीडा देख्न कसरी सक्थ्यो र ? त्यसैले ऊ आँखा चिम्लेर गीत कराउँथ्यो, कन्थ्यो, रुन्थ्यो । त्यति हुँदाहुँदै पनि अन्ततः आफ्नो घाँटीको कारण कालान्तरमा फाफुराले गाउन छोड्नै प¥यो । सुन्नेहरुले ‘अबदेखि गाइस् भने निमोठिदिन्छौं’ भनेर अन्तिम चेतावनी दिएका थिए । यसरी राष्ट्रले एउटा अत्यन्तै विलक्षण प्रतिभा गुमाएको थियो । नत्र भने फाफुरा आजसम्म भीम निरौलाभन्दा ठूलो गायक भइसक्थ्यो ।
तर के गर्नू, यो देशमा कला र गलाको कदर भनेको भाषण गर्ने र पूरा नहुने सपना देखाउनेहरुको मात्र हुनेरहेछ त । यो कुराको फाफुरालाई सँधै दुःख लाग्थ्यो । त्यसैले फाफुरी आफ्नो जीवनमा आएपछि फाफुराले एकपटक फेरि आफूभित्रको तानसेनलाई व्यूँताउने भरमग्दूर प्रयास गरेको थियो । त्यसको परिणम के भयो भन्ने कुरा म आज तपाईलाई सुनाउँछु ।
हामी नेपालीहरु चाहे जुनबेला जेजस्ता कारणले थरिथरि कित्तामा बिभाजित भए पनि धन्य दुईचारवटा यस्ता कुराहरु छन्, जसले हमीलाई सँधै एकताको सूत्रमा बाँधेर राख्छ । राजनीति र त्यससंग सम्बन्धित बगम्फूसे समाचारहरुको रुचि बाहेक अरु सबै भनेजस्तो कला र साहित्यसंगै सम्बन्धित कुराहरु हुन् । हामी अधिकांश नेपाली कवि हौं । लेखक हौं । अनि गायक हौं । अझ स्पष्टसंग भनौं भने हरेक नेपाली जन्मजात गायक राजनीतिज्ञ र साहित्यकार हुन्छ । हामीभित्रको गायक त आमाको गर्भबाट यो धरतीमा अवतरण हुनासाथ पहिलोपटक च्याँ...को आवाज निकाल्नासाथै जागृत भैहाल्छ । राजनीतिज्ञ चाहिँ आठ कक्षा पढ्न थालेका बेलादेखि जुर्मराएर क्रान्ति गर्न थाल्छ । बरो साहित्यकार अलि ज्याद्रो हुन्छ बज्या । त्यसैले बाहिर निस्कन निकै लामो समय लिन्छ । तर निस्कन चाहिँ कुनै न कुनै बेला निस्किएरै छाड्छ । त्यसमा शंकै नगरे हुन्छ । धेरैजसो मानिसहरुको चाहिँ सरकारी सेवा, प्रहरी वा सेनाको उच्च पद, चिकित्सा तथा अन्य पेशामा अत्याधिक सफल भएपछि फुत्त बाहिर निस्कन्छ र धडाधड सिर्जनाहरु गर्न थाल्छ । अवकाश पाएपछि केही कामै भएन, के गरौं केगरौं भयो, अनि लेख्न थालें भन्नेहरु तपाईंले पनि भेट्नुभएकै होला ।
फाफुरा भित्रका अरु कुनै कलाकार बाहिर ननिस्केपनि गायक त स्वतः हुर्किसकेको थियो । त्यस साँझ बाहिर झमझम पानी परिरहेको थियो, त्यसैले ऊ बडो साङ्गिीतिक मूडमा थियो । गीत गाउने भनेपछि पनि हरेक नेपालीहरुको एउटा विशिष्ट शैली हुन्छ । तपाईंले कत्तिको हेक्का गर्नुभएको छ कुन्नि । त्यो गौरवशाली परम्परालाई कायम राख्दै अधिकांश नेपालीले जसरी नै फाफुराले आफ्नो गर्धन कक्रक्क हुने गरी अह्ररो बनायो । अनि उसले घोक्रोबाट निस्कने आफ्नो आवाजलाई सकेजति च्यापेर गीत कन्न सुरु ग¥यो । हामी नेपालीलाई यसरी गीत कराउने, कन्ने वा रुने शैली अपनाएपछि आफ्नो स्वर दुरुस्तै नारायणगोपालको जस्तो भएको भ्रम हुन्छ र हामी त्यही आत्मरतिमा रमाउँछौं । त्यसैले फाफुरालाई पनि लाग्यो, अब बिनको आवाज सुनेर लठ्ठिएकी नागिन जसरी फाफुरी त्यो स्वरको माधुर्यमा झुम्दै उसको छेउमा आएर लुटुपुटु गर्न थाल्छे । तर फाफुरी त लुसुक्क बाहिर गएर बरण्डामा पो उभिई । फाफुरा भित्रको नारायणगोपाल टक्क रोकियो । सिलिण्डर युग अन्त्यको शंखनाद सहित उद्घाटन भएको गोबरग्यास प्लान्ट अचानक जसरी नै उसको गायन पनि राम्ररी शुरु नहुँदै बन्द भयो । यति मिठो तान र आलापको महत्व नबुझ्ने फाफुरी कस्ती होली भनेर उसलाई झनक्क रिस पनि उठ्यो । ऊ ठेक्का नपाएको पप्पुझैं मुद्रामा बाहिर गयो र फाफुरीलाई त्यसको कारण सोध्यो । उसले मायालु पारामा भनी,
‘हेर फ्याफ्स । आजकल अवस्था पहिलेजस्तो छैन । अब पुरुष हिंसाको विरोधमा पनि कडा कानूनहरु बन्दैछन् रे भन्ने सुनेकी छु । तिमीले गाएको सुन्दा बेकारमा छिमेकीहरुलाई मैले तिमीलाई कुट्छु र तिमी रुन्छौ भन्ने भ्रम पर्ला । कसैले पुलीसमा रिपोर्ट गर्देला भनेर तिमी गीत कराउन्जेल म बाहिर गएर उभिएकी हूँ ।’
फाफुरा भित्रको नारायणगोपाल थचक्कै बस्योे ।
त्यही तोडमा फाफुरा डेराबाट निस्क्यो । रत्नपार्कमा गएर टोपीले मुख छोपेर सुत्यो र ऊ आफ्नै सुरमा गाउन थाल्यो । उसको गीत सुनेर एकजना दयालु मानिसले वीर अस्पतालसम्म डो¥याएर लगिदिन्छु भन्न समेत आयो । उसलाई लागेछ, फाफुराको एपेन्डिक्स फुटेको हुनुपर्छ । मानवताको नाताले त्यो प्रस्ताव लिएर आएको मानिसलाई आफूले गीत गाइरहेको हो भन्ने बुझाउन फाफुरालाई निकै समिय लागेको थियो । अर्को एकजनाले त स्वीकृति नै नलिई आफ्नो मोबाइलमा फाफुराको गीत रेकर्ड गर्न पनि भ्याए । बल्ल कुनै गीतसङ्गीत बुझ्ने पारखी भेट भयो भनेर फाफुराले उसलाई आधा मानो बदाम पनि खुवायो । ऊ बदाम छोडाउँदै फाफुरालाई भन्न थाल्यो,
‘अरु एक दुईवटा यस्तै आवाज निकालिदिनुस् न ।’
फाफुराले मच्चीमच्ची बच्चुकैलाश र फत्तेमानको हुर्मत लियो । त्यो मानिस फाफुरालाई आभार प्रकट गरेर जान लाग्दा फाफुराले सोध्यो,
‘यो केका लागि रेकर्ड गर्नुभएको हो, कमसे कम त्यति त बताइदिनुस् ।’
‘म सिनेमा बनाउने मान्छे हूँ । अहिले एउटा हरर फिल्म बनाएको छु । त्यसमा भूत आउने बेला मान्छेलाई तर्साउन मलाई पाश्र्वमा के आवाज प्रयोग गर्ने भनेर चिन्ता भइरहेको थियो । आजकल चोरचार गरेर पाश्र्वसंगीत हाल्न समल्दैन । मसंग नयाँ बाउनेल बजेट थिएन । भाग्यले मलाई तपाईंसंग भेटाइदियो । अब हेर्नुस्, हलमा यो सिनेमा लाग्दा दर्शकहरुले सिटैमा सुसु गरेनन् भने मेरो कान काटिदिनुहोला ।’
त्यो मानिस दंग पर्दै गयो । फाफुरालाई वैराग लाग्यो । उसको प्रतिभाको कदर गर्ने मानिस के यो देशमा नभएको नै हो त ? यही पिरले घोत्लँदा घोत्लँदै अचानक उसको मगजमा एउटा कुरा झिलिक्क चम्क्यो । केही दिन अघि उसले कतै पढेको थियो, आजकल हाम्रो देशमा बडेबडेमानका गायन प्रतियोगिता हुन थालेका छन् । त्यसमा भाग लियो भने एकैपटक देश विदेशमा फाफुराको सुरिलो गायन गुञ्जिनेछ । किन रत्नपार्कमा कराएर आफ्नो प्रतिभा खेर फ्यालिरहनू ? उसको जस्तो आवाजलाई त पूरै देशले सुन्नुपर्छ । ती प्रतियोगिताको अडिसन हुने ठाउँ पत्ता लागउनुप¥यो भन्ने जोशले फाफुरा रत्नपार्कबाट काहिर निस्क्यो । हो, त्यहाँ सुनाउनलाई जति दुःखदायी कथा भयो, त्यति नै अघि बढ्ने मौका हुन्छ भन्ने पनि उसलाई थाहा थियो । त्यसैले ऊ ढुक्क थियो ।
किनभने, तपाईंहरुलाई थाहा छ फाफुराभन्दा दुःखी मानिस त अहिले नेपाली काँग्रेसको पार्टीभित्र खोजे पनि पाइँदैन ।